Waxaa uu isku dayey inuu kala furo miinadii, waana uu ku fashilmay, nafsaddiisina waa ay is dhiibtay, waxaana la foolxumaatay inuu si foolxun ugu dhinto saxaraha, waxaa maskaxdiisa hor imaanayey farriimo xusuus ah isagoo qoyskiisii la jooga, isagoo waalidkiis la sheekeysanaya. Markii dambe waxaa u yimid nin reer Baadiye ah oo lugtu go'antahay oo wata gabar yar uu dhalay, ninkaas ayaa isaguna waxaa lugta goosatay miinooyinka ku xabaalan saxaraha. Ninka ayaa waxaa uu Mike ku dhiirrigeliyaa inuu miinada ka koco oo nolosha u bareero oo geesinimo muujiyo, isku day badan kadib waa uu ku qancin waayey, habeenkii markii la gaaray Mike waxaa soo weeraray Yey xabbad ayuuna isaga dhiciyey. Mike waxaa uu gaaray xaalad is dhiibitaan, daal harraad, baqdin, walwal iyo rajo xumo.
Su'aalahaan ayaa waxa aan qabaa inay u baahanyihiin in lagu sameeyo cilmi-baarisyo xeel dheer, si xal loogu raadiyo hantidaas dalka usoo kacaysa sidii looga faa'ideysan lahaa.
Haddii aan isku dayo inaan aragti shakhsi ah ku darso ka jawaabidda su'aalahaan 3da ah, waxaa ay ila tahay:
Midda 1aad: Badankood aqoonyahanka soo baxay ayaa iyagoo aanan aqoon meel ay waxka bilaabaan, waxaa aad ku arkaysaa meheradaha lagu shaaheeyo iyo goobaha lagu caweeyo, iyagoo niyad jab weyn uu ka muuqdo. Halka tiro aad u yar ay ka howlgalaan hay'adaha iyo qaar kamid ah ganacsiyada, iyagoo badankood halkaa ku hela qaraabaysi ama dalab shaqo oo ay dhib ku u mareen helideeda.
Midda 2aad: Aqoonyahanku marka uu soo boxo kuma filna aqoontiisa theory-ga ah ee waxaa uu u baahanyahay tababarro uu ku gado xirfadihiisa iyo aqoontiisa, sidoo kale suuqa ayaanan u diyaarsanayn aqbalaadda aqoonyahanka cusub ee soo biiray, madama ganacsiyada iyo goobaha shaqada ay haystaan dad aanan iyaguba aqoon sida loola macaamilo dadka noocaas ah, sidoo kale goobaha iyo jaamacadaha ayaanan lahayn xiriir iyo aragti looga faa'ideysto aqoonyahankaas. Sidoo kale waxaanan jirin ha'yado maal-galiya fikradaha ganacsiga ee ay qaar aqoonyahankaasu la yimaadaan, inkastoo ay jiraan kuwo maalgelin bixiya, balse waxaa ka horreeya shuruudo aad iyo aad u adag oo badanaa uusan ka bixin karin qof dhalinyaro ah oo hadda jaamacad kasoo baxay, lagana yaabo in xaalad adag uu wax kusoo bartay.
Midda 3aad: Dalka waxaa kajira xir-xirnaan badan oo ka timid wacyiga bulshada oo aad u hooseeya, ganacsiyo badan dalka kama ay jiraan, haddii aad suuqa martid waxyaabaha laga ganacsado kama badna tobaneeyo waax-ganacsi oo badankooda ah aasaasiyaadka ganacsiga. Waxaa jira in aanan la tixgelin hal'abuurka oo aysan jirin siyaasad dhowrta haddii lala yimaado fikir hal'abuur ah oo ayba dhacayso qof lacag badan haysta inuu hal'abuurkii inta min guuriyo, suuqaba ka qabsado qofkii lahaa fikradda cusub, aysanna jirin qaab loola xisaabtami karo ama lagu dacweyn karo. Sidoo kale waxaa jira in shaqooyin badan oo muhiim ah ay ku bahdilanyihiin dalka oo qofka ka shaqeeya aysan bulshadu tixgalin siin, waxaana ay ubadanyihiin shaqooyinka farsamada, wax soosaarka gacanta, beerashada, dhismaha, qurxinta, makaanigga, sawiraadda, fanka & madadaalada.
Dhammaan arrimaha aan kasoo hadlay, maaha wax kaligay ii muuqda ee waa wax ay wada arkaan qofwalba oo si dhow u eega xaalka aqoonyahanka soo baxaya iyo suuqa waxa kajira, waxaana jirta baqdintii Mike haysatay oo kale, taas oo keentay in qofwalba uu ka baqayo in ay miino ku qaraxdo "Shaqadaan amaa magac xumo ka qaaddaa, amaa sharaftaadii hoos udhacdaa, waalidkaa amuu ku habaaraa, bulshadu amay ku faquuqdaa....".
Xusuusnow taladii odayga reer baadiyaha ahaa ee Mike la hadlay, u bareer nolosha, aqoontaada soo bandhig, fikirkaaga gad, hal'abuurkaaga sii daa. Bulshada aad ka baqaysid ogow adigaa u maqan, adiga ayey ku sugaysaa, bulshadan wacyigoodu waxaa uu joogaa meeshii ugu hooseysay, waxaa ay caleemo qoyan kusoo dhaweeyaan kuwo iibsanaya dhulkooda, baddooda, aayohooda oo ah idinka. Aqoonyahan adigaa lagu sugayaa ee maxaad sugaysaa?
Filmka The Conductor (De Dirigent) Dumarka Soomaaliyeed maxay ka baran karaan? (Faallo)
Hordhac: Haweeneyda gacanta midig usha ku haysata ee sii jeedda shaqada ay hayso waxaa la yiraahdaa Conductor. Shaqadeedu waxa ay tahay in ay muusiga Orchestra ama Choire loo yaqaan hoggaamiso, iyada oo adeegsanaysa tilmaan gacmeed iyo usha yar ee ay hadba dhinac u dhufato.
Filmka The Conductor (De Dirigent) oo la sameeyey sanadkii tegey, ayaa waxaa laga metelay qiso dhab ah oo dhacday qarnigii 20aad, xilligaas oo ay inan lagu magacaabo Antonio Brico riyadeedu ahayd in ay noqoto Conductor. Balse xilligaa ayaa waxaa mamnuuc ka ahaa fanka in qof dumar ahi booskaas loo dhiibo. Brico, si ay riyadeeda uga dhabayso, waxaa ay ka shaqo billowday xarun lagu ciyaaro muusiga Orchestra-da, iyadoo shaqadeedu ahayd in dadka u yimaada dhagaysiga ay maamuuskooda, soo dhaweyntooda iyo kala nidaamintooda ka shaqayso. Shaqadii ayaa waxaa looga saaray kadib markii ay safka hore usoo fariisatay si ay uga ka faa'iideysato Maestro Mengelberg oo kamid ahaa raggii xilligaa dunida hoggaaminayey fanka gaar…
Saaxiibka kula talinaya (Sheeko ujeed fog)
Shalay galab, aniga oo maqaaxi ku sugaya saaxiibkay Cabdullaahi, baa agteyda waxaa isku waraystay laba nin oo iyana meesha fadhiyey. "War haye! Maxaa inoo kala dambeeyey? Reerkii see ahaa?". "War waa nabad. Gabadhiina waan furay, carruurtiina hooyaday baa haysa oo aan u geystay". "Oo maxaad u furtay gabadha?". "Ninyahow qaddar ALLE baa dhacday, masayr iyo wareer bay igala dhammaan weyday, anna waan u fududeeyey". "Haa, war sifiican baad yeeshay, la'iskuma baro naagaha jileecaas, bagah!".
Bal u fiirso! Ninkaasi waxaa la siiyey talo dhiirrigelinaysa in uu ku saxsanaa burburinta reerkiisii hore, reer dambe haddii uu yeeshana waxaa haystaa qodob dastuuri ah oo lagu qaado haweeney kasta oo masayrta.
La taliyaha noocaas ah waxaa uu noqon karaa aniga, adiga ama qof saaxiibkeen ah oo noo dhow, taladiisuna ay na saameyso, lagana yaabo in aannu go'aanno hore oo aan qaadannay uu nagula taliyey. Saaxiibkay Cabdiraxmaan oo xil culus loo ma…
Madaxweyne, bal naga hubi manhajkan!
Waxaan qormadaan gaaban ku soo gudbinayaa codsi gaar ahaaneed oo aan u dirayo Madaxweyne Farmaajo. Waxaan asxaabta waxgaradka ah, weydiisanayaa inay codsigayga gaarsiiyaan Madaxweynaha.
Inta aanan manhajka (Syllabus) cusub dhexgelin, waa in aannu isweydiinnaa manhajkan mayahay mid noosoo saari kara aqoonyahanka ay Soomaaliya u baahantahay?
Inta aynaan sii guda gelin, waxa muhiim ah in aannu kala fahanno manhaj/jaantus (Syllabus) iyo (Curriculum)
Manhaj (Syllubus) waxa uu xoogga saaraa maaddooyinka ardeygu qaadanayo mawaadiicda uu ka koobanyahay iyo maaddo kasta waxa la rabo in ay ardeyga aqoontiisa ku kordhiso.
(Curriculum) Inkastoo aanan u hayn erey bixin Soomaali ah, misana waa dejinta nooca ardeyga la rabo in uu soo boxo. Tusaale, Soomaaliya waa dal u saaxiib kheyraadka badda, xoolaha, beeraha, shidaalka iwm. Hadaba, si aan u helno aqoonyahan soo saara, ka faa'iideeya, kana qeyb qaata hormarinta kheyraadkaas, waa in maaddooyinka la xiriira kheyraadka dalku leeyahay ahmiy…
Xogta Boggan waxaa xaq u leh fasaxeeda Cabdullaahi Bootaan.